Zvinhu zvishanu zvaunofanirwa kuita mazuva ese kuti uve noutano | Bezzia
Susana Garcia | 06/04/2021 20:00 | Matipi ehutano, Utano
Kuva noutano dzimwe nguva inyaya yerombo, nekuti majini ane zvakawanda zvekuita nazvo, asi zvakare ine chekuita nemararamiro atinorarama uye nezvose zvatinoita. Chiito chega chega uye tsika yega yega inokanganisa muviri wedu uye inopedzisira yotikanganisa, munguva pfupi kana yakareba, saka tinofanira kuziva kuti tinofanira kuita zvimwe zvinhu kuti tive noutano uye tigare hupenyu hune hutano hunotibvumidza kuti tisvike pakukwegura mararamiro akanaka.
Tichaona Zvinhu zvishanu zvaunofanirwa kuita zuva rega rega kuti uve noutano munguva refu. Uyu ndiwo mujaho wedaro refu uye zviito zvikuru zvekuti kubva kune rimwe zuva kusvika kune rinotevera zvinoita kuti unzwe zvirinani hazvina basa. Iwe unofanirwa kunyatsoita zvinhu kuti uve nehutano hupenyu. Aya marudzi ezvinhu chikamu chehupenyu hwako uye zviito zvezuva nezuva zvinokutendera kuti uzvichengete.
1 Zororo rekuzorora
2 Kudya kwakaringana
3 Ita mitambo zuva nezuva
4 Inwa mvura
5 Dzivisa kunetseka
Kuti uwanezve zuva nezuva uye uine hupenyu hwakagwinya, zvakakosha kuti uzorore kuitira kuti muviri nepfungwa zvipore. Izvi zvakaratidza kuti kana tikasarara zvakanaka tinenge taneta, yakadzikira uye yakamanikidzwa. Saka hazvisi zvekungovata mamwe maawa, asi kuti zvimwe zvacho ndezvemhando. Edza kuti zvese zviri mumba zvinobatsira kuzorora. Dzivisa zvidzitiro uye usaise terevhizheni, nekuti izvi zvinoita kuti usarara zvakanaka. Chengetedza mattress yakanaka iyo inobatsira iwe kuzorora uye kufunga nezve tembiricha yemukamuri. Unogona kuzvibatsira nezvimwe zvinhu sehwekunhuwirira kana ruzha runokubatsira kuzorora. Kugadzirira nzvimbo kwakakosha, kunyangwe iwe uchifanirawo kudzivirira madhiri makuru uye kurovedza muviri panguva yekurara, sezvo ichizokugonesa. Kana nezvose izvi usingakwanise kurara zvakanaka, zvingave zvakakodzera kuti ubvunze nyanzvi.
Isu tese tinoziva kuti kudya kwakaringana chii. Iwe unofanirwa kutora michero nemiriwo zuva nezuva, mukuwedzera pakudzivirira chikafu chakagadziriswa, sezvo zviri izvo zvinokuvadza zvakanyanya. Kana iwe uchida zvimwe zvakawandisa, zvinofanirwa kunge zviri panguva chete kwete zuva nezuva. Mune zuva nezuva iwe unofanirwa kudya mwenje uye zvakasiyana chikafu uchidzivirira yakawandisa munyu, mafuta kana shuga. Kana iwe ukadzidza kunakidzwa nechikafu chakasarudzika, nekufamba kwenguva hauchazodi kudya chikafu chine shuga yakawandisa kana mafuta uye uchaona manzwiro auri kuita. Kudya kwakanaka kunotibatsira kuva nehunhu hwakanaka hwekufamba, kugara zvakanaka uye kugaya kwakanaka.
Ita mitambo zuva nezuva
Zvimwe haunzwi sekuda kuita mutambo wakasimba zuva rega rega, asi iwe unogona kurovedza muviri uye kufamba zuva nezuva. Zvakakosha kuti uite maekisesaizi kunyangwe kuri kwekufamba nhanho yakanaka, ita maekisesaizi kutambanudza kana kusimba. Izvo zvakakosha kusagara zuva rese kana kuita chero chinhu, nekuti kunyangwe zvidhoma zvidiki zvinoverengera pakupedzisira uye zvinotibatsira kuti tive noutano. Edza kutsvaga zvaunoda, ita dzakasiyana mitambo uye unakirwe navo.
Kunyangwe chiri chokwadi kuti tese tinofarira zvinwiwa zvine shuga kana kunyangwe idzo dzine doro, chokwadi ndechekuti chinhu chine hutano kwazvo chatinogona kunwa imvura. Kunwa mvura zuva nezuva kwakakosha zvikuru Zvakanaka, muviri wedu unozvida. Iwe unogona kugadzira infusions pasina kuwedzera shuga, sezvo iri zvakare hutano, kana kuwedzera remoni wedge kumvura. Zvese izvi zvinokubatsira kuti unwe zvakawanda uye nekuzvipa zvinonaka.
Mune nzanga yanhasi izvi zvakaoma kwazvo, asi zvinodikanwa kudzikisa nhanho dzekusazvibereka kushushikana kwatinako kana kuti tinogona kana kurwara. Iyo kushushikana kunokonzera matambudziko uye nekudaro tinofanirwa kudzidza kuzvidzora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Zvinhu zvishanu zvaunofanirwa kuita mazuva ese kuti uve noutano
Maekisesaizi ekuti uite mune yekurovedza muviri yakakwana kwazvo